Expatwoman Dubai - နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီး Expatriate များအတွက်အကြံဥာဏ်
Expatwoman ဒူဘိုင်းကျွန်တော်ယူအေအီးအတွက်ငှားရမ်းကြသည်။ သငျသညျအမြိုးသမီး Are ?. စော်ဘွားအတွက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအဖြစ်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရရန်ရှာဖွေနေပါသလား။ ကျနော်တို့အမျိုးသမီးတွေပြည်တော်ပြန်များအတွက် In-depth ကိုလမ်းညွှန်ပေးနေကြသည်။ ကျနော်တို့ယူအေအီးများတွင်အမျိုးသမီးများ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူများအတွက်အကူအညီပေးနေကြသည်။ ကျွန်တော်ထောက်ပြလိမ့်မည် အလုပ်နေရာလွတ်ကိုရှာဖွေဖို့ဘယ်လိုစသင်ပဲ့ပြင်။ ထိုအခြေအနေမျိုးတွင်အလုပ်လျှောက်ထားပြီးဒူဘိုင်း၌အင်တာဗျူးဖြေဆိုပါ ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ Expat အမျိုးသမီးတစ် ဦး.
ရေရှည်မှာတော့မင်းကမိန်းမဖြစ်မယ် ဒူဘိုင်းတွင်နေထိုင်။ ထိုအခါတစ်ချိန်တည်းမှာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေ။ ကြှနျုပျတို့မှာ ဤနေရာတွင်သင်ကယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အ start ကိုကူညီ။ မှတ်ချက်ချခဲ့ပြီးအဖြစ်ကျွမ်းကျင်သူများအမျိုးသမီးတွေအတွေ့အကြုံရှိကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များဖြစ်ကြသည်။ အလုပ်အကိုင်ကိုရှာဖွေရှာဖွေနေအများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူများသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပဲအထီးမဟုတ်စကားပြော အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုမှပြောင်းရွှေ့ဖို့ရှာဖွေနေ.
ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများအတွက်ပြည်တော်ပြန်ယခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူထားရှိဖြစ်လာသည်။ သင်တို့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ်တွင်သင်၏ CV ကိုသို့မဟုတ်အခြားစုဆောင်းမှုအသေးစိတ်ထည့်နိုင်သည် ဒူဘိုင်းယောဘနှငျ့န်ထမ်းခေါ်ယူမှု။ ကြောင်းတွင်အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့ဒေသခံအလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုပို့စ်တင်စုဆောင်းမှုအေးဂျင့်ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။ ဒူဘိုင်းဆောင်းပါးတွင်, သငျသညျအများအပြားအလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သငျသညျ Expatwoman ဒူဘိုင်းရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ကြည့်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ဖတ်ပါ။
ကျွမ်းကျင်သူများအမျိုးသမီးဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များ။ ကျနော်တို့စီမံခန့်ခွဲခဲ့ကြ သင်ကူညီမယ့်လမ်းညွှန်အတူတူထားရန်။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ, သင်ဆဲသင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖွံ့ဖြိုးရေးလိုအပ်ချက်များမှသင့်လျော်သောအလုပ်အကိုင်နှင့်သင်တန်းရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ရှင်းမှ, ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီယူအေအီးမှာအကောင်းဆုံးတက်ကြွမြို့ကြီးများဖြစ်ကြသည်။ ယူအေအီးစီးပွားရေးစုဆောင်းမှုရာအရပျ၏ဗဟို၌တည်၏။ ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအများအပြားရှိ အင်ဒီးယန်းပြည်တော်ပြန်များအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကို.
ပစ္စုပ္ပန်အဲဒီအချိန်တုန်းက အဆိုပါစုဆောင်းမှုဖြစ်စဉ်ကိုဥရောပမှကွဲပြားခြားနားသည်။ ရုတ်တရက်ပေမယ့်အနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေအားလုံးအရာရာကိုနားလည်သဘောပေါက်ကြပါဘူး။ တိုင်းထမ်းရှာဖွေသူ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေရေးတွေအများကြီးရိုးရှင်းတဲ့စေမည်။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ ဒူဘိုင်း၌ရှိသောအလုပ်ရှာဖွေသူများကူညီပေးနေ။ ဒီနေရာမှာကျနော်တို့သင်ယူအေအီးအတွက် Expatwoman ဒူဘိုင်းဝန်ထမ်းဖြစ်လာကူညီဖို့ရန်။
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေ၏ရည်ရွယ်ချက်သည်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီစုဆောင်းမှုအဖွဲ့ကအမြဲပြောနေ။ အတွင်းအရေးအပါဆုံး ဒူဘိုင်းစုဆောင်းမှု မှတ်မိဖို့။ သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေနေပါသည်အခါ။ သင်အလုပ်ရှင်မှသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံကိုရောင်းဖြစ်ကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။ သင်အင်တာဗျူးကိုရောက်ရှိသည့်အခါယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော။ သင် .. လုပ်ရမည် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးရှိသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းအောင် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဈေးကွက်ထဲမှာ။ အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းများအတွက်, သငျသညျအရေးပါသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ရပါမည်။ နှင့် သစ်ကိုကုမ္ပဏီမှအဖိုးတန်များအပြင်.
ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီမသာ။ ထိုမိန်းမသည်ပြည်တော်ပြန်ကိုလည်းကာတာနိုင်ငံအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ကာတာနိုင်ငံတစ်ဦးကယောဘရှာဖွေခြင်းလွယ်ကူသည်မဟုတ်။ သို့ဖြစ်. သင်၏အဓိက ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့မှချဉ်းကပ်မှု။ သင်ထင်ထက်အများကြီးပိုကောင်းဖြစ်သင့်သည်။ ရေရှည်မှာ, သင့်ကံကောင်းပါစေနေ့တိုင်း မူတည်. ။ သငျသညျ cryptocurrency အလုပ်အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်ကြောင်းအလုပ်အမျိုးအစားတွင် ကာတာနိုင်ငံကိုပြုကြရန်။
အမျိုးသမီးလုပ်သားများရှာဖွေနေကာတာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများသည်။ သူတို့အခွအေနမြေိုး, အမျိုးသမီးတစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူများရှာနေကုမ္ပဏီတွေအများကြီး။ အဆိုပါအလုပ်အကိုင်များအပိုင်းအချို့သည်အမျိုးသမီးများကပိုကောင်းလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ မြို့လယ်စျေးဝယ်အတွင်းပိုင်းဥပမာကိုရွှေဆိုင်တွေသည်။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးရောင်းအားကိုယ်စားလှယ်များရှာဖွေနေနီးပါးနေ့တိုင်း။ ဤသည်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကာတာနိုင်ငံအတွက်အလွန်ရေပန်းစားသည် ပြည်ပမှာအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်များအတွက်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ရှိသည် အလုပ်ရှင်ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှာကြည့်.
ဒါကပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ် အလုပ်တစ်ခုရှာဖွေတဲ့အခါမှာသင်တို့အဘို့ကိုကြည့်သင့်ကြောင်းအရာ ရရှိနိုင်သည့်ရာထူးလိုအပ်ချက်များကိုနှင့် application ဖြစ်စဉ်များသကဲ့သို့ကောင်းစွာဤနေရာတွင်စာရင်းနေကြသည်အဖြစ်။ ကာတာနိုင်ငံအတွက်ကုမ္ပဏီဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုသင်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ရှာဖွေရေး refines နှင့် အလုပ်အကိုင်အ Scan ကို၏အန္တရာယ်ကို minimize လုပ်။ သင်တို့သည်လည်းလူအပေါင်းတို့သည်ရှာဖွေနိုင်သည် အလုပ်နှင့်အဆက်အသွယ်နှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက် ကုမ္ပဏီများတိုက်ရိုက်အစိုးရများစာမျက်နှာများပေါ်မှာ။
ဒိုဟာအတွက်ဂျော့ဘ်အမျိုးသမီး၏ကျွမ်းကျင်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်သငျသညျဒိုဟာမြို့တော်တွင်ကမ်းလှမ်းမှုနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အားလုံးတပြင်လုံးကိုအထက် ပင်လယ်ကွေ့ဒေသသစ်ကိုကျွမ်းကျင်သူများအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖွင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုနှစဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီကျော်။ ကျိန်းသေ, အမျိုးသမီးပညာရှင်များကူညီပေးခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ် မွမ်ဘိုင်းကနေကောင်းသောအလုပ်အကိုင်များဘို့သင့်နေရာ ဒိုဟာ၌, အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာကာတာနိုင်ငံ။
ဒိုဟာအတွက်ရှာဖွေနေအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏ရည်ရွယ်ချက်သည်။ ယင်းကိုကြည့်ဖူး အကြီးဆုံးအွန်လိုင်းအဘိဓါန်အလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီများ ကာတာနိုင်ငံ၌တည်၏။ ဒိုဟာကာတာနိုင်ငံအတွက်အဓိကမြို့ဖြစ်၏။ သငျတို့သညျထိုမိနျးအဖြစ်အလုပ်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်ရှိရာသာရာအရပျ။ ဒိုဟာစီးတီး၌, သင်လုပ်နိုင်သည် အလုပ်ရှင်များရာပေါင်းများစွာကိုဆက်သွယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီသင်ကူညီနိုင်ပါတယ်။
ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုနှင့်အတူ, ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးပြည့်စုံစုဆောင်းမှုဖြစ်စဉ်ကိုကမ်းလှမ်း။ ကျနော်တို့ဒိုဟာစီးတီးမှအမြိုးသမီးမြားလွှဲပြောင်းရန်ကူညီပေးနေနေကြသည်။ ကျနော်တို့ကာတာနိုင်ငံထဲတွင်နေရာခံရဖို့သင်ကူညီပေးဖို့ကဒီမှာရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း တစ်ဦးပြည်ပရှိအဖြစ်အရှေ့အလယ်ပိုင်းကတခြားနေရာလွတ်ကိုရှာဖွေ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ, သင်ပြု Expatwoman ဒူဘိုင်းပြည်ပရှိဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းစုဆောင်းမှုဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပါ။ ဒိုဟာမြို့အတွက်ကာတာနိုင်ငံထဲတွင်နေရာရလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပေးသည်။ ကျနော်တို့ကအမြဲအမျိုးသမီးတစ်ဦးအလုပ်ရှာဖွေသူများကိုကူညီဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျနော်တို့များမှာ MBA ဘွဲ့ရနှင့်အတူအတိအကျလယ်ပြင်၌အလုပ်အကိုင်များကိုရှာဖွေဖို့ကြိုးစားနေ။ ကာတာနိုင်ငံအတွက်ကကောင်းတစ်ဦးပညာရေးရှိသည်ဖို့အလွန်အမင်းတန်ဖိုးရှိသောသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်ကအလုပ်ရှာဖွေနေကြသည်လျှင်။ သင့်ရဲ့ရှာဖွေအတွက်ဘာရိန်းစဉ်းစားပါ။ ဒါပေါ့ စော်ဘွားအလုပ်အကိုင်များရှာဖွေအပြင်။ တိုင်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးဘာရိန်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရနိုင်။ ကြောင်းပေါ်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခု ပြည်ပရှိအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုအလုပ်ရှာတှေ့နိုငျ ဘာရိန်း၌တည်၏။
သငျသညျဒေသခံအလုပ်က်ဘ်ဆိုက်များမှာကြည့်နိုင်ပါသည်။ ထိုမှတပါး, Bayt မှသင်၏လျှောက်လွှာကိုပေးပို့သို့မဟုတ် ဧရာမသတ္တဝါကြီး။ ဒါ့အပြင်ဘာရိန်းအတွက်သံရုံးမှာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အကြည့်ရှိသည်။ ဤစကားမှန်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ ယူအေအီးနှင့်စော်ဘွားများအတွက်ရှာဖွေနေအလုပ်အကိုင်များ။ ဒီတစ်ခါလည်းအလုံအလောက်ဒါဘာရိန်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဘူး။ ဘာရိန်းအတွက်သင့်လျော်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုရှာဖွေ Aljazeera အလုပ် site ကိုသို့မဟုတ်အခြားအလုပ်က်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်.
ပြည်တော်ပြန်ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာတွေ့နိုင်ပါသည်တော်တော်များများသောနေရာများရှိပါသည်။ ဘယ်လိုဒူဘိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေမတွေ့ရှိဖို့ တစ်ဦးသင့်လျော်သောလမ်းညွှန်အဖြေကိုလိုအပ်ပါတယ်။ ဧည့်သည်ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အဘို့ရှာဖွေသည့်အခါကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကအသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များရှိသည်ဖို့လိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်။ ဥပမာ စျေးကွက်များအတွက်ဒူဘိုင်းအကြံဉာဏ်ကိုအလုပ်ရှာဖွေနည်းလမ်းများ.
ကျွမ်းကျင်သူများအမျိုးသမီးကွန်ယက်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အမြိုးသမီးမြားရဲ့အကြောင်းကိုငါသိ၏။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ဤမျှလောက်ယူပြီး။ သငျသညျလူတစ်ဦးအတွက်အခြားအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်တွေ့ဆုံရန်အခါတိုင်း။ သင်လိုအပ် networking ကိုစတင်ရန်။ သငျသညျအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုအဘယ်သူမျှမကိစ္စ။ ကျွမ်းကျင်သူများ၏ကွန်ယက်ကိုစတင်ပါ။ သင်သိသောသူကိုကြည့်ပါ။ အဘယ်သူတတျနိုငျသစစ်ဆေး သငျသညျငှားရမ်းထားရကူညီပေးရန်.
ရန်သေချာစေပါ သည်အခြားကျွမ်းကျင်သူများမိန်းမနှင့်စကားပြော။ အမြဲတမ်းသေတ္တာအပြင်ဘက်ကိုကြည့်ဖို့ကြိုးစားပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစက်ဝိုင်းစစ်ဆေးပါ။ သင့်ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေတစ်တန်ဖိုးများကိုဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည်။ ဘယ်တော့လဲ ပင်လယ်ကွေ့တွင်အသစ်တခုအနေအထားရှာဖွေနေ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်ပြီးသားကိုသိသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး။ ကျိန်းသေတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ် သင်တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေကြသောအခါအံ့သြဖွယ်အကူအညီနဲ့.
သင်သည်သင်၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဝကနေကိုသိအကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး။ အလုပ်ရှာဖွေရေးအတွက်တန်ဖိုးရှိသောဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ကြိုးစားကြ ယူအေအီးရှိနှင့်ပြီးသားအလုပ်လုပ်သူတစ်ဦးဦးကိုရှာဖွေ။ သာနိုင်ငံတကာကစုဆောင်းကုမ္ပဏီများ၏အချို့။ ဒါကြောင့် LinkedIn တို့ကျော် networking ကျိန်းသေသင်တစ်ဦးအလုပ်ရရှိရန်ကူညီပေးပါမည်။
အခက်ခဲဆုံးအရာရှာဖွေစုဆောင်းရောက်ရှိဖို့ရန်ဖြစ်ပါသည်။ သင်စိတ်ဝင်စားသင့်တယ် ဒူဘိုင်းအတွက်တောင်အာဖရိကအလုပ်အကိုင်များ။ တောင်အာဖရိကစုဆောင်းမှုမန်နေဂျာအချို့နိုင်ငံတကာကငှားရမ်းနေကြလို့ပဲ။ အဘယ်သူသည်သင့်အားသက်ဆိုင်ရာဖုန်းနံပါတ်ရနိုင် စုဆောင်းမှုမန်နေဂျာ?။ သို့မဟုတ်သင်ငှားရမ်းနိုင်သူလူတစ်ဦး၏ပင်အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဒါ့အပြင်အလွန်ကောင်းသောစာချုပ်။ စုဆောင်းရေးတာဝန်ခံအတွက်လူတစ်ဦးထွက်ရှာရန်။ သင်တို့ကိုလည်းတတျနိုငျသလျှင် သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပေါ်သို့သင်၏ CV ရှောက်သွား။ နှင့်သင့်ကိုယ်စားအကောင်းတစ်ဦးစကား၌ထားတော်မူ၏။
Expatwoman ဒူဘိုင်းယခုအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ ကူညီခြင်းကျွမ်းကျင်သူများကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာတွေ့။ သငျသညျစော်ဘွားအတွက်အလုပ်ရှာနေနေတယ်ဆိုရင်သင်အလွယ်တကူလုပ်နိုင် ကုမ္ပဏီများကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒူဘိုင်း Airpot အုပ်စုများမှလူကြီးမင်း၏ CV ကို drop။ ထိုမှတပါး, သင်သည်အခြားအလုပ်ရှာဖွေသူများနှင့်အတူချိတ်ဆက်နိုင်ပြီးသူတို့သည်သင့်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ပင်ရိုးရှင်းတဲ့အကြံပေးချက်ကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်သင့်ရဲ့လမ်းကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုသတိရပါ။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယခုပြုတော်မူပြီ တစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူများမိန်းမသည်နေရာပြောင်းရွှေ့အကြံပေးချက်များ။ အသစ်ကပြည်တော်ပြန်အဘို့ဤပြည့်စုံလမ်းညွှန်နှင့်အတူ, သငျသညျဒူဘိုင်းထဲတွင်နေရာခံရဖို့ကိုဘယ်လိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရူပါရုံကိုရသင့်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီလည်းသူများရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရောက်ရှိဖို့ကူညီပေးနေ။ အဆိုပါအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း Expatwoman ဒူဘိုင်းများအတွက်စျေးကွက်ကြီးထွားလာသည်.
အလုပ်ရှင်၏အမည်ကိုရှာဖွေနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဒီကုမ္ပဏီအကြောင်းပိုမိုအချက်အလက်ကိုရယူဖို့ကြိုးစားပါ။ ထို့အပြင်သက်ဆိုင်ရာတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များကိုရှာဖွေကြိုးစားပါ။ သငျသညျအလုပ်ရှင်များမှတောင်းဆိုလာတဲ့အခါ။ ကြိုးစား သင့်ရဲ့မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံဘာမျှမပြော။ ရန်တောင်းဆိုသည့်အခါထိုမှတပါး, သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံနှင့်အတူထရပ် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်ရှင်များ။ သငျသညျကုမ္ပဏီများအားတောင်းဆိုလိုက်တဲ့အခါ။
သင့်ရဲ့ပစ်မှတ်အားဟောပြောဖို့ဖြစ်ပါတယ် ပြည်ပမှာအလုပ်များအတွက်ငှားရမ်းမန်နေဂျာ။ သည်အခြားအလုပ်ရှာဖွေသူများအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်လိမ့်မည်။ ဖော်ရွေဖြစ်လာအောင်မြင်မှုမရှိနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်အရမ်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်ရမည်။ လည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမန်နေဂျာအဖြစ်ချွန်ထက်။
ကြိုးစား ကုမ္ပဏီအတွင်းပိုင်း HR မန်နေဂျာကိုဆက်သွယ်။ နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာလူတစ်ဦးကွာသငျသညျထောက်ပြပါစေပါဘူး။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, ငှားရမ်းမန်နေဂျာတောင်းဆို။ လုပ်ဖို့လွယ်ကူတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ဖြစ်လာသည်ဘယ်တော့မှမ။ သို့သော်အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကထိရောက်သောအခါသင်ပြောနေတာနဲ့ CV ကိုပေးပို့ခြင်း။ အထူးသဖြင့်သင်တို့ကိုလူတစ်ဦးမှ သြဇာလွှမ်းမိုးချင်ပါတယ်။ သင်၏ CV ကိုသူတို့ Inbox ထဲတွင်နိုင်တဲ့အခါသင်ကိုအောကျမေ့ပါလိမ့်မည်။
မျက်နှာချင်းဆိုင် Talking အဆိုပါစုဆောင်းမှုမန်နေဂျာနှင့်အတူ။ ဒါဟာသင်ပြီးပြည့်စုံသောအခွင့်အလမ်းကိုငါပေးမည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အရောင်းအစေးအောင်စကားပြော။ နှင့် ငှားရမ်းမန်နေဂျာပေါ်မှာကောင်းသောစှဲတွန်း။ အလုပ်ခံရဖို့ကောင်းတစ်ဦးအခွင့်အလမ်းရှိခြင်း Expatwoman ဒူဘိုင်း။
အပြုသဘောဘက်တွင် ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများက။ နှင့်စုဆောင်းရေးအေဂျင်စီများငှားရမ်း။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်အမျိုးသမီးများစုဆောင်းခြင်း။ ယူအေအီးအတွက်စုဆောင်းရေးအေဂျင်စီများ။ ရှာဖွေနေသည် မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှာနိုင်ငံတကာမှာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ အများဆုံးအရည်အချင်းပြည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုရှာဖွေရန်။ ပြီးနောက် 7th စော်ဘွားအကောင်းဆုံးနေရာများမှာ အဲဒီအတွက်။
အံ့သြဖွယ်ဒူဘိုင်းများအတွက်ပြည်ပရှိအမျိုးသမီးရဲ့ရှာဖွေ။ အဆိုပါရာထူး၏အချို့တစ်ဦးတည်းသောအမျိုးသမီးရဲ့ touch လိုအပ်သည်။ အဆိုပါစားပွဲထိုးသို့မဟုတ်ပင်ဟိုတယ်စီမံခန့်ခွဲမှု။ ထိုသူအပေါင်းတို့ရှာဖွေနေ ထိပ်တန်းကျွမ်းကျင်သူများအမြိုးသမီးတဒူဘိုင်းများအတွက်။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီပေးဖို့ကဒီမှာရှိပါတယ်။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာဥပမာ။ အမျိုးသမီးများသည်မကြာခဏမန်နေဂျာများဖြစ်လာသည်။ သင်မြင့်မားသောလစာမထင်ကြပေမည် အမျိုးသမီးများအတွက်အလုပ်များ. အကြီးတန်းမန်နေဂျာကကမ်းလှမ်းအလုပ်အကိုင်။ နှင့်အလုပ်အမှုဆောင်ရာထူး။ အခုတော့အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုပိုမိုလူကြိုက်များဖြစ်လာရသည်။
အလွန်အပြုသဘောအာရပ်စော်ဘွားပြည်ထောင်စုအေဂျင်စီသစ်ကိုကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရှာဖွေနေ။ ဥပမာတစ်ခုမှာဒူဘိုင်းအတွက်ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 ဖြစ်ပါသည်။ စျေးကွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏စာရင်းကိုချဖန်တီးခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် 2020 သည်အထိစုဆောင်းနေသောကုမ္ပဏီများသည်။ ပင် ဒူဘိုင်းအတွက် Google ကငှားရမ်းဖြစ်ပါတယ်.
အတော်လေးနိမ့်ဒူဘိုင်းအတွက်ပေးဆောင်အလုပ်နေရာလွတ်သတိပြုပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဒူဘိုင်းစီးတီးစကားပြော။ စူပါအနိမ့်တစ်ဦးဆွေမျိုးရာဇဝတ်မှုရှိခြင်း။ ဒါဟာသင် scammed နိုင်ပါတယ်လို့ပြောမထားဘူး။ သင်အမြဲရေတွင်းတစ်တွင်း-paid အလုပ်အမှုဆောင်ဖြစ်လာကြပါပြီ။ အလုပ်အကိုင်အချို့သည် paid အနိမ့်ဖြစ်ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်လတ်ဆတ်တဲ့ဘွဲ့ရလုပ်သားတွေ။ ဥပမာစူပါဝင်ငွေကိုမျှော်လင့်လို့မရပါဘူး ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံအတွင်းအလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်။ အလုပ်ရှင်အချို့ကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ လူမျိုး၏အားသာချက်ကိုယူပြီးလုပ်ပါ။ တစ်ဦးစုဆောင်းမှုအေဂျင်စီပိုက်ဆံပေးချေရန်သင့်အားမေးရန်အဘို့အဒါဟာတရားမဝင်ဖြစ်ပါသည် ယူအေအီးအတွက်အလုပ်တစ်ခုရရန်.
်ထမ်းခေါ်ယူမှုနှင့်ငှားရမ်းမန်နေဂျာ။ တစ်ဦးချင်းစီကိုယ်စားလှယ်လောင်းမြှင့်တင်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့အလုပ်သူတို့သငျသညျထားပါရန်ဖြစ်ပါသည်။ စုဆောင်းမှုမန်နေဂျာများအတွက်အဘယ်သူမျှမကွာခြားချက်ရှိပါတယ်။ သင်တစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူများအမျိုးသမီးတစ်ဦးသို့မဟုတ်လူကိုရောက်နေတယ်ဆိုရင်။ ယင်းအပေါ်ငွေရှာငှားရမ်းမန်နေဂျာ အောင်မြင်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်း။ ်ထမ်းခေါ်ယူမှုစီမံခန့်ခွဲမှုကအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီများကငှားရမ်းထားသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်တစ်ဦးချင်းစီကငှားရမ်းခန့်အပ်ဘယ်တော့မှမည်မဟုတ်ပါ။ သာကုမ္ပဏီရဲ့အထဲမှာကော်ပိုရိတ်မန်နေဂျာသည်။ ဒါ့အပြင် စုဆောင်းမှုလုပ်ကိုင်ဖို့နေရာတစ်နေရာရှာတွေ့ နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ။ ဒူဘိုင်းအတွက်မန်နေဂျာငှားရမ်းနှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါ။
အဓိကတာဝန်များကို အတွေ့အကြုံရရှာဖွေစုဆောင်းများအတွက်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အကုမ္ပဏီရန်သင့်အားရောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျမှကုမ္ပဏီ၏ရောင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်သေချာသင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစျေးကွက်၏စည်းကမ်းချက်များ၌အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်ကိုသိပါစေ။ များစွာရှိပါသည် ဒူဘိုင်းအတွက်ငှားရမ်းမန်နေဂျာထွက်ရှာရန်နည်းလမ်းများ။ သင်တန်း၏, ရှာဖွေစုဆောင်းသာအများဆုံးပညာတတ်အလုပ်အကိုင်အကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်စိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြသည်။
သင်လုပ်နိုင်ထိုကြောင့်အဆိုးဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်။ အလုပ်ကော်မရှင်ပေးဆောင်၏ထောင်ချောက်သို့ရရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအလုပ်တစ်ခုရဖို့ရန်သင့်အားကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ သို့သော်ငါတို့သည်သင်တို့အလုပ်အခွင့်အလမ်းမပေးနိုငျသညျ။ ကျနော်တို့စုဆောင်းမှုဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာသာကူညီပေးနေနေကြသည်။ တစ်ခုဖြစ်သည်ကိုရှာဖွေဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကိုများအတွက်တရားဝင်အလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီ။ ဤစကားမှန်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့။ အဖြစ်မှန်မှာတော့သည့်အခါကျွမ်းကျင်သူများအလုပ်လျှောက်လွှာလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးပါပြီ။ အင်တာဗျူးအဘို့ကိုခေါ်ရပါမည်။ နောက်ဆုံးတော့ မရတိုင်းအလုပ်ရှာဖွေသူဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အိမ်ပြန်လာပြည်တော်ပြန်၏အချို့။
ဥပမာအားဖြင့်အချို့အမျိုးသမီးအလုပ်ရှာဖွေသူများ။ ပြည်ပမှာနေထိုင်ထောက်ပြရန်။ အချို့မှာ အိန္ဒိယပြည်တော်ပြန်အမျိုးသမီးတွေလည်းဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီအားဖြင့်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့။ သူတို့အခွအေနမြေိုးကိုသင်ဒူဘိုင်းအတွက် Expatwoman ဖြစ်လာမှရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်။ သို့သော်လက်ရှိတွင်, သင်နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်နေထိုင်လျှက်ရှိသည်။ သင်လုပ်နိုင်သည် အလုပ်ရှာဖွေသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကိုသုံးပါ.
ကျိန်းသေ, ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများကအကောင်းဆုံးတဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ ရယူသည် သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း application ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ HR မန်နေဂျာ။ စကားအနည်းငယ်အတွက်အချိန်အများကြီးကြာပါသည်။ အထူးသဖြင့်ယူအေအီး၌တည်၏။6လအတွင်းထက်ဒီတစ်ခါလည်းအများကြီးပို။ အတော်ကြာစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အင်တာဗျူးအတွက်လုံလောက်သောအတွေ့အကြုံရှိသည်ရန်။ သငျသညျရှိသည်ဖို့လိုအပ် ဟိုတယ်အလုပ်အကိုင်အဘို့အလုံအလောကျအတှေ့အကွုံ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်တတ်နိုင်သမျှအနီးကပ်စုဆောင်းမှုမူဝါဒအကိုလိုကျနာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သင်၏ CV အပေါ်ကောင်းတစ်ဦးအထင်အမြင်စေရန်ကြိုးစားပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သငျသညျပွငျဆငျအင်တာဗျူးရောက်လာပြီဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းသင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအစှဲသငျသညျအတတျနိုငျဆုံးစေသည်။ အထူးသဖြင့် ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်အများအတွက် သငျသညျသတိရဖို့လိုအရာတစျခု။ အခါကုမ္ပဏီနောက်ဆုံးတော့လိမ့်မည် သငျသညျအင်တာဗျူးအဘို့ဖိတ်ခေါ်။ ကျိန်းသေ, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းတစ်ခု updated မိတ္တူယူဆောင်လာရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဤအချက်များ, အစမတ်စိတ်ကူးပေးတော်မူ၏။ သင့်ရဲ့ဟောင်းအလုပ်ရှင်များထံမှထောက်ခံချက်များအက္ခရာများကိုရောက်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
အခြိနျမှနျမှသင့်ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်အကိုင်အသေးစိတျမှာကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အမြဲ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်အကိုင်များများအတွက်၏ CV ကိုစစ်ဆေး။ တဖန်သင်တို့အလုပ်ရှင်များမှတင်ပြသမျှသောစာရွက်စာတမ်းများကြောင်းသေချာပါစေ။ အဘယ်သူမျှမသဒ္ဒါအမှားတွေနှင့်အတူစေလွှတ်တော်မူသည်အကောင်းဆုံးနှင့်ကောင်းစွာတင်ဆက်တဦးဖြစ်လာသည်။ သင်တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ခရီးဆောင်လက်ဆွဲသေတ္တာသို့မဟုတ်ကောင်းတဲ့အနက်ရောင် folder ထဲမှာအားလုံးစာရွက်စာတမ်းများရှိသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ပတ်ပတ်လည်ရွေ့လျားပြီးမကောင်းတဲ့ကြည့်တွေနဲ့စာရွက်စာတမ်းများတင်ဆောင်လို့ပဲ။ သငျသညျရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်အင်တာဗျူးဘို့ပြေးလမ်းထင်ရစေသည်။
ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးများအတွက်စားဆင်ယင် code နှင့်အင်တာဗျူး
အတှေ့အကွုံမြား၏အနှစ်နှင့်အတူဒွန်တွဲ။ သင်သွားကြသည်အရာကိုသိရန်လိုအပ် အဆိုပါလမ်းလျှောက်-in ကိုအင်တာဗျူးဘို့ဝတ်ဆင်ရန်။ အပြုသဘောဘက်တွင်အင်တာဗျူး၏နံနက်ယံ၌တစ်ဦးစိတ်ဖိစီးမှုအဆင့်ကို minimize ကြိုးစားပါ။ သင်သိရန်လိုအပ်သည်။ ဒူဘိုင်းတစ်ရှေးရိုးစွဲ Arabic အဘိဓါန်ယဉ်ကျေးမှုမြို့ဖြစ်၏။ ယူအေအီးအစိုးရ တင်းကျပ်သောကန့်သတ်အမျိုးသမီးတွေဝတ်စားဆင်ယင်သင့်ကြောင်းအဆိုပါလမ်းစပ်လျဉ်းရှိသည်။
အဆိုပါ ယူအေအီးအတွက်ပါကစ္စတန်အလုပ်ရှာဖွေသူများ မွတ်စလင်နိုင်ငံအတွင်းရှိပြုမူဖို့ဘယ်လိုသိတယ်။ ဒူဘိုင်းတွင်ထိုမိန်းမသည်အတော်လေးကန့်သတ်စားဆင်ယင် codes တွေကိုရှိခြင်း။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဥရောပနှင့်အမေရိကန်အမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုကိုစားဆင်ယင်သုံးစွဲဖို့ကြိုဆို။ သင်တို့မူကား Expatwoman ဒူဘိုင်းနေထိုင်သူဖြစ်လာကတည်းက။ သငျသညျဗေီယဉ်ကျေးမှု၏ Know-ဘယ်လိုသိပါလိမ့်မယ်။
ဒူဘိုင်းတွင်ဥပမာအားဖြင့်, ကစားဆင်ယင်ချွတ်ဖေါ်ပြခြင်းဝတ်ဆင်ရန်မှားယွင်းနေသည်။ ထိုမိန်းမသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝတ်စုံကိုနီးပါးမည်သည့်အမျိုးအစားအတွက် sexy ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ နှင့် ဒီစော်ဘွားအတွက်အလွန်အမင်းသင့်လျော်သည်။ သငျသညျမှာကြည့်နိုင်ပါတယ် ဒူဘိုင်းတွင်ဝတ်စားဆင်ယင်ဖို့ဘယ်လို?.
အမျိုးသမီးတစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူများအဘို့အခက်ခဲဆုံးအလုပ်အကိုင်များလည်းရှိပါသည်။ ဥပမာ ဒူဘိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများအဘို့မော်တော်ကားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ ဒါဟာရဖို့ Extreme ခိုင်မာတယ်။ ရုံသစ်ကိုသင်တို့အား Porsche ကိုဝယ်ခြင်းငှါသွားကြသည်ထင်ပါတယ်။ အဆိုပါအရောင်းစာရေးစဉ်းစားလူများအများစုမှာကျော်လာနှင့်သင်ဖိတ်ခေါ်ပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်ထိုမိန်းမသည်ယူအေအီး၌မပါလျှင်။ ယဉ်ကျေးမှုကြောင့်တစ်ဦးကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ထူးဆန်းတဲ့အရာ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်များအတွက်အလွယ်ကူဆုံးအလုပ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်စကားပြော ဆရာအဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ရန်။ အဆိုပါဆရာမအလုပ်အကိုင်နေရာလွတ်ကျွမ်းကျင်သူများမိန်းမတို့အဘို့ဖွင့်ထားကြသည်။ ကျောင်းများအတွက်အိန္ဒိယအမျိုးသမီးတစ်ဦးဆုံးမဩဝါဒပေးအဖြစ်နေ့တိုင်းအတော်လေးမြင်နိုင်။ ထိုအခါကလေးတွေအများစုသူတို့ကိုမချစ်။ အဆိုပါပြည်တော်ပြန်အများစုဟာသင်သိရ ဒူဘိုင်းအလုပ်သမားတွေအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ပါသည်။ ဒီတော့ယူအေအီးအတွက် Expatwoman အဘို့ကောင်းသောအလုပ်အကိုင်များနှင့်မကောင်းတဲ့အလုပ်အကိုင်လည်းမရှိ။
Expatwoman ဒူဘိုင်း - ကျနော်တို့ငှားရမ်းနေကြ
ရိုးရှင်းစွာကိုယ်ရေးရာဇဝင် upload နှင့်တစ်ဦးကိုစတင်ရန် အသစ် Expatwoman အဖြစ်ယူအေအီးအတွက်အလုပ်ရှာဖွေရေး။ ငါတို့သည်လည်းရှိပါတယ် ဒူဘိုင်းအတွက်ဖိလစ်ပိုင်ပြည်တော်ပြန်ငှားရမ်း.
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်စီးတီးကြီးထွားလာအမြန်ဆုံးပါ! - Expatwoman ဒူဘိုင်းယနေ့စတင်ပါ !.